उखु किसानका ऋण-पत्र
सोमबार, माघ ५, २०७७ लाइभ
अंगदबहादुर सिंह काठमाडाैं - सोमबार, मंसिर २९, २०७७
माइतीघरको सडकमा फिँजिएका घामका राप पनि मलिन थिए। छिप्पिसकेको घाम पनि त्यत्ति न्यानो थिएन।
त्यो घामले सेकिन नसकेको चिसो सडकमा थचक्क बसेका थिए, सर्लाहीका किसान रामेश्वरप्रसाद यादव।
नागरिकताको ‘फोटोकपी’ कागजको पछाडितिर उनले लेखेका छन्-
गाडी भाडा ८००
खाना खाएको १ सय ५०
र, सोमबारसम्म उनको २ हजार ४० रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
असोज २६ गते सर्लाहीबाट हिँड्दादेखि अहिलेसम्म टिपेको उनको खर्च विवरण हो।
तर, दुःखका अक्षर कसरी पो कोर्नु!
वर्षाैंदेखि पसिना बगाएर उब्जाएको उखु बेचेर पनि पैसा नपाउँदाको पीडा उनका अक्षरजस्तै बटारिएका छन्।
कागजको एउटा कुनामा उनले लेखेका छन्– ब्याजसहित ऋण ६ लाख...।
‘साहुले त पैसा दिएनन्, अब सरकारले नदिए त कसरी घर जानु र?,’ काठमाडौं आउँदा ऋण काढेको ५ हजारवाला टुक्रा देखाउँदै उनले भने, ‘अब त लासै जाला बरू, सास फर्किन्न।’
आफ्नै पसिनाको मोल माग्दै उखु किसान फेरि आइतबारदेखि राजधानी आएका छन्, आन्दोलन गर्न।
सर्लाही रामनगर–१ का यादवले उखुको बक्यौता नपाएको चार वर्ष भइसकेको छ।
चार वर्ष अघि उनले अन्नपूर्ण चिनीमिललाई ३ सय २४ क्विन्टल उखु बेचेका थिए, उधारोमा।
तर, चार वर्षसम्म उनले एक सुकोसमेत पाएनन्।
यादवले मिलबाट १ लाख ७४ हजार रुपैयाँ लिन बाँकी छ।
चार वर्षसम्म पैसा पाउनु त परको कुरा बरू उल्टै ६ लाख ऋण लागेको छ।
मिल सञ्चालकले चार वर्षसम्म पैसा दिएनन्।
‘छोराछोरी पढाउनै पर्‍याे, खाना खानै पर्‍याे, घर खर्च चलाउन गाउँबाट ऋण लिदालिदा आपत आइसक्यो, हामीले कसरी बाच्नु,’ उनले निन्याउरो मुख लगाउदै भने।
साहुले पैसा दिएन, छोरीको बिहे गर्ने बेला भयो।
जेठी छोरीको बिहेका लागि मलङ्गवामा रहेको कृषि विकास बैंकबाट १ लाख ५० हजार ऋण लिए।
ऋण तिर्न गाह्रो हुन्छ थाहा थियो।
तर, साहुले दिन्छ कि भन्ने आसमा ऋण लिई छोरीको बिहे गरे।
यादवले न ऋण तिर्न सके नत साहुले पैसा दियो।
ऋण लिएको १ लाख ५० हजारको ब्याज ६ लाख २७ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ पुगेको छ।
२० वर्षदेखि उखु खेतीबाटै परिवारको हातमुख जोड्ने उनलाई ठूलो आपत आइलागेको छ।
‘खेती गर्न लिएको ऋणको ब्याज बढेर ६ लाख पुगिसक्यो,उखु बेचेर ऋण तिरौंला साचेको थिए। तर, यति टाढा आएर आन्दोलन गर्नुपरिरहेको छ,’ उनी भन्छन्।
आठजनाको परिवार पाल्ने एउटै सहारा उखु खेती हो यादवको।
भएको सबै जग्गामा उखु लगाएका थिए। नगद पैसा आउँछ भनेर।
तर, उनलाई मिल सञ्चालकले त लोप्पा खुवाए नै सरकारले समेत तमासा हेरिरह्यो।
‘काठमाडौं आउन ५ हजार ऋण लिएर आएको हुँ, पैसा नलिई कसरी घर जानु?,’ बरू लास जान्छ सास जान्न,’ यादव भन्छन्।
पैसा नलिई घर फर्किदा आउँदा लिएको ऋण समेत थपिने पिर छ उनलाई।
उखु खेतीबाहेक न कुनै इलम छ न त कुनै सीप।
आफ्नै पैसाका लागि यतिको दुःख गर्नुपर्दा उनलाई दिक्दार लागेको छ।
यादव अघिल्लो वर्षपनि पुसको चिसोमा काठमाडौं आएका थिए।
त्यहि उखुको बक्यौता माग्न।
उद्योग मन्त्रालय-उद्योगी-किसानबीच गत पुसको सम्झौता पश्चात उनले ३५ हजार रुपैयाँ त पाए। तर, १ लाख ७४ हजार पाएनन्। मिल सञ्चालकले त ठग्यो-ठग्यो सरकारले समेत वास्ता नगरेको यादवको गुनासो छ।
‘ठूलो छ सरकार, अटेन किसान’
वार्तामा बोलाउँदा किन गएनन् उखु किसान?
प्रकाशित मिति: सोमबार, मंसिर २९, २०७७
बुटवलका व्यवसायीले बुझाए मन्त्री रायमाझीलाई ज्ञापन पत्र
संघका अध्यक्ष बाबुराम बोहोराले रुपन्देहीका उद्योगीहरुले ट्रंक लाइन विलिङ समस्याले चिन्तित बनेको विद्युत प्रशारणमा गुणस्तर घटेको तथा पुसदेखि चैत्रसम्मको अफ आवर सुविधा उपलब्ध नगराएको लगायतका समस्या समाधानका लागि ज्ञापन पत्र बुझाएको बताए। आयोमेल संवाददाता
गत पुस १२ गते राईविरुद्ध नेकपाका ३७ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए। नेकपाका ६७ सांसद छन्। हस्ताक्षर गरेका मध्ये उदयपुर ख बाट प्रत्यक्ष निर्वाचत सांसद कला घलेले अलग प्रयोजनका लागि लिइएको हस्ताक्षरको गलत प्रयोग भएको भन्दै राईलाइ साथ दिने बताएकी थिइन्। आयोमेल संवाददाता
'ब्रेकअप'पछि सफल बनेका ६ बलिउड नायिका
बलिउडमा थुप्रै फिल्म सम्बन्ध विच्छेदपछि जिन्दगी बर्वाद बनेको कथामा आधारित छन्। उनीहरूको विछोडको पीडालाई कथामा निकै मार्मिक रूपमा प्रस्तुत गरेका हुन्छन्। हाम्रै वरपर पनि सम्बन्ध विच्छेदपछिको निरस जीवन विताइरहेका थुप्रै मानिस देख्न सक्छौं। तर, केही मानिसले सम्बन्ध टुटिसकेपछि झनै प्रगति गरेका कैयौ उदाहरण पनि हाम्रै ओरिपरि देख्न सकिन्छ। आयोमेल संवाददाता
नामै काफी छ, पृथ्वीनारायण शाह! वसन्तकुमार उपाध्याय
अब हेर्दै जाऔं ‘केपीयुग’ को पतन सुन्दर खनाल